FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA ELKHOUND NORVEZIANA - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Elkhound norveziana
Tia ilay norvezianina Elkhound
Lisitry ny alika nafangaro elkhound norveziana
Norvejiana Elkhound Grey
Norveziana Elkhound Black
Ny norveziana Elkhound dia alika mahery vaika sy salantsalany. Fohy sy matevina ny fananganana ny vatana. Mahitsy sy matanjaka ny lamosina. Ny loha miendrika wedge dia malalaka amin'ny sofina. Matevina kokoa ny fotony eo am-potony, mihidy nefa tsy tonga amin'ny teboka iray, miaraka amin'ny fijanonana voafaritra mazava. Ny nify dia tokony hihaona amin'ny kaikitry ny hety. Ny maso antonony sy miendrika oval dia volontany mainty. Ny sofina dia apetraka ambony loha, mafy orina nefa be finday. Lalina sy somary malalaka ny tratra. Miseho mahitsy avy eo aloha ny tongotra. Ny paws oval dia kely ary tery miaraka amin'ny pad matevina. Atao avo ny rambony, voaforitra mafy ao aoriana. Matetika misy lalandara amin'ny tongotra eo anoloana fa tsy ao aoriana. Ny palitao miady amin'ny toetr'andro sy matevina dia matevina sy mafy. Ny palitao dia fotsy miaraka amin'ny tendrony mainty ary akanjo ambany maivana ary eo ambaniny misy vava mainty, sofina ary tendron'ny rambony. Teratany mainty Elkhound zana-kazo teraka mainty sy fotsy volo rehefa tokony ho herinandro eo ho eo rehefa mihalehibe ny palitaony.
Mailo, sahy, tsy mivadika ary sariaka ny Norveziana Elkhound. Na dia somary natokana ho an'ny olon-tsy fantatra aza ny sasany, dia hiarahaba ny fianakaviana sy ny namana fantany am-pahavitrihana. Mahay mianatra, mendri-pitokisana ary mavitrika, namana tsara izy ireo. Tahaka ny alika Arctic hafa, ny Elkhound norveziana dia manana saina samirery ary mahaleo tena ihany, na izany aza dia tia ny fianakaviany izy. Manana toetra miavaka izy ireo, ary madio ihany raha ampitahaina amin'ny karazana hafa. Mety ho somary sarotra ny manofana. Zava-dehibe ny hentitra amin'ny alika ity, mampiseho fahaiza-mitarika entana tsara . Mila hentitra izy ireo, nefa malefaka fananarana . Famantaranandro voajanahary ary amboa mpiambina . Ity karazana ity dia tia mandehandeha sy mivoaka. Nihalehibe izy ireo ho mpihaza izay mitazona ny rembiny, manenjika azy io hatrany mandra-pahatongan'ny mpihaza. Raha manjary mibontsina ny fangalan'izy ireo dia tsy maintsy ampianarina ampy izy ireo aorian'ny fampandrenesany anao indray mandeha, tonga ny fotoana hangina. Rariny rehefa Training ity karazany ity, ary fantaro fa kaninina izy io, tsy olombelona ary karakarao araka izany ny alika. Raha tsy azony antoka 100% ny azy ireo toerana mpanaraka an'izao tontolo izao afaka mamorona fironana hiady amin'ny alika hafa izy ireo. Elkhounds dia mpihaza ary tsy tokony hatokisana irery amin'ny kely biby fiompy tsy kaninina toy ny hamsters , voalavo biby , totozy na kisoa ginea , na izany aza ny sasany dia fantatra fa nifanaraka tamin'izy ireo rehefa niasa tamin'ny fifandraisany tamin'ny alika ny tompony fa ny biby kely dia alfa amin'izy ireo. Afaka mifanaraka amin'ny saka ao amin'ny fianakaviana izy ireo. Tsy ampy fanatanjahan-tena sy / na fanatanjahan-tena izy ireo dia mety ho lasa tady avo. Aza hadino ny manao ny ombelahin-tongotry ny alika rehefa mandeha an-tongotra na eo ivohonao ianao, tsy eo alohanao mihitsy, mba hanamafisana ny maha-alfa azy ny olombelona noho ny alohan'ny mpitondra entana alika.
schipperke pomeranian afangaro alika kely hamidy
Haavony: Lehilahy 19 - 21 santimetatra (48 - 53 cm) Vavy 18 - 20 santimetatra (46 - 51 cm)
Milanja: Lehilahy 50 - 60 pounds (23 - 27 kg) Vehivavy 40 - 55 pounds (18 - 25 kg)
Mora amin'ny dysplasia amin'ny hip, dermatitis pyotraumatic ary PRA. Indraindray dia ny Fanconi syndrome. Mora mahazo lanja, aza mavesatra ny sakafo.
Tsy maninona ny norvejiana Elkhound ao amin'ny trano iray raha toa ka ampiasaina tsara. Mavitrika ao an-trano izy io ary mahomby indrindra amin'ny tokontany malalaka farafaharatsiny. Elkhounds dia tia toetrandro mangatsiaka.
Ny norveziana Elkhound dia alika mavitrika izaitsizy izay mivelona amin'ny hetsika mavesatra. Mila entina isan'andro, lava, haingana izy ireo mandeha na mihazakazaka . Na dia eny am-pandehanana aza ny alika dia tsy maintsy ampidirina amin'ny sisin-tongony na ao ambadik'ilay olona mitazona ny firaka, toy ny ao an-tsain'ny alika ny mpitarika no mitarika ny làlana, ary ny mpitondra dia tokony ho olombelona. Tokony hanana fanazaran-tena adiny iray farafahakeliny. Hahafinaritra azy ny mihazakazaka eo akaikin'ny bisikiletanao na mihazakazaka tena tsara any an'ala, saingy tadidio fa tia mandehandeha ireto alika ireto. Raha mahazo hanitra mahaliana izy ireo, dia mety tsy hiraharaha anao izy ireo, na tsy handre anao akory rehefa miantso azy ianao.
Boston terrier mpanao ady totohondry Mix alika kely
Ny palitao mafy, maditra, tsy mahazaka toetrandro dia mora taovolo. Tokony kosehina tsy tapaka izy io, miaraka amin'ny fikarakarana fanampiny omena mandritra ny alika mandatsaka ny palitao matevina. Rehefa raraka ny alika dia mifikitra amin'ilay volo vaovao ny volo maty. Ny volo maty dia tokony hesorina amin'ny borosy fingotra na borosy hazo misy nify vy roa andalana. Ny borosy sy ny tohotra fotsiny noho izany antony izany dia amidy amin'ny fivarotana biby fiompy. Mandrosoa raha tsy ilaina, satria manala ireo menaka voajanahary ao amin'ny hoditra. Toy ny alika Arctic hafa, tsy manana ny fofon'ny volon'ny alika mahazatra izy ireo. Ny palitao dia sady mahazaka rano no tsy mahazaka loto. Ity karazana ity dia mpantsaka mavesatra ara-potoana.
Ny Elkhound norveziana dia nipoitra tany Scandinavia ary iray amin'ireo karazana tranainy indrindra an'arivony taona izay ary efa nisy hatramin'ny vanim-potoana vato. Taolana mitovy amin'ny Elkhound norvezianina ankehitriny nanomboka tamin'ny 4000 ka hatramin'ny 5000 talohan'i JK no hita. Raha hametrahana fomba fijery kely momba azy io dia efa nisy ireo alika ireo hatramin'ny nihazazan'ny olona tamin'ny antsamotady ary nipetraka tao anaty lava-bato. Alika mihaza sy mpiambina ho an'ny Vikings izy ireo. Ireo alika dia nampiasaina ho mpihaza lalao lehibe sy kely manara-dia biby toy ny moose, elk, bera, liona an-tendrombohitra, badger, lynx, amboadia, renindry ary bitro. Ny alika dia manara-maso ny fitrandrahana vato ary manaitra ny mpihaza amin'ny alalany, mitazona ilay biby mandra-pahatongan'ny mpihaza. Elkhounds norveziana dia afaka mamofona lalao amin'ny kilaometatra mahery miala azy. Ireo alika dia mirona hiasa tsara kokoa amin'ny alina noho ny amin'ny antoandro. Ny karazany ihany koa dia sarobidy amin'ny alika moka. Raha misy ady, ny minisitry ny fiarovana norveziana dia manana fahefana hanetsiketsika ireo Elkhound tsy miankina manokana. Tao anatin'ny fotoana faramparany, ny toetra mahafinaritra sy azo antoka an'ny Elkhound dia nanampy tamin'ny fahazoana toerana amin'ny trano maro ho biby fiompy ankamamiana. Ny anarana 'Elkhound' dia dikanteny mivantana avy amin'ny anarany norveziana 'Elghund', izay midika hoe 'alika moose.' Amin'ny norvezianina, ny hoe 'elg' dia midika hoe 'moose' ary 'hund' dia midika hoe 'alika.' Ny karazany dia naseho voalohany tamin'ny 1877 rehefa nanomboka nanao fampisehoana ny Fikambanan'ny mpihaza norveziana. Ny AKC dia nanaiky voalohany ny karazany tamin'ny 1913. Tamin'ny 1923, niforona ny Elkhound Club ary neken'ny British Kennel Club tamin'ny fomba ofisialy ny karazany. Ny sasany amin'ireo talentan'i Elkhound dia misy: mihaza, manara-dia, miambina, miambina, miambina, milomano ary mailamailaka. Misy koa a Elkhound Norveziana Mainty izay ekena ho karazany misaraka, saingy saika mitovy amin'ny karazany ankoatra ny loko.
Avaratra, AKC Hound
' Tia ilay norvezianina Elkhound dia nandeha an-tongotra niaraka tamin'ny Bruno the Boxer . Alina 80 degre iny ary nafana i Tia. Nandeha an-tongotra ambadiky ny sisin-dranomandry izahay ary nahita zavatra toa lanitra ho azy i Tia! Tendrombohitra oram-panala nesorina avy teo an-tampon-kavoana! Nosososain'i Tia eraky ny orony ny horony, nanakodia ny hatsiaka. Aminy, ny lanezy amin'ny andro mafana dia tsara noho ny tadin'ny soavaly! '
Tia the Fanavotana Elkhound norveziana amin'ny 4 taona mandry amin'ny ahitra
'Sophie, aseho eto rehefa olon-dehibe, dia Elkhound norvezianina lehibe. Izy dia nivadika ho namana tsara sy alika tsara fitondran-tena. Tiany ny mianika vato sy milalao ny lanezy. Mipetraka any Canada i Sophie ary tia ny ririnina mangatsiaka. Matory tsara izy any ivelany ao amin'ny lanezy amin'ny -30 degre C (-22 Fahrenheit). '
mpiandry alemà mix black and tan coonhound mix
Sophie the Norwegian Elkhound toy ny alika kely amin'ny 7 volana mandry eo am-pandriana
'Ity i Apollo, Elkhound norvezianina 2 taona. Apollo dia avy amin'ny ra mandriaka. Alika tsy mivadika sy be fitiavana izy ary mankafy tsara ireo mpianakaviny tsy kaninina (saka sy ferrets). Manana ny toetra mampiavaka ny taranany izy, ao anatin'izany ny mpihaza sifotra masiaka sy mpandeha tsy miato rehefa biby na olona tsy fantatra no eo amin'ny faritaniny. Izy dia mpiambina mahafinaritra, nefa tsy handratra olona mihitsy. Tiany ny oram-panala, ary mihazakazaka toy ny alika kely mitaingina ny vavany misokatra amin'ny lanezy mandritra ny oram-baratra. Tia milalao farihy sy renirano koa izy mandritra ny volana mafana. Mipetraka miaraka amintsika ao afovoan'i Massachusetts izy. '
Apollo ilay norveziana Elkhound purebred ao anaty lanezy
Apollo ilay Elkhound norveziana purebred mankafy ny rano
Gunnar the norvejiana Elkhound toy ny alika kely amin'ny 3 volana— 'Gunnar the norvejiana Elkhound dia alika kely mahay sy mahery fo, hanao na inona na inona hitsaboana azy. Tianay ny milaza fa noana foana i Gunnar ary tiany ny miaraka amin'ny olony! Ny hany zavatra tian'i Gunnar ankoatry ny fanenjehana sifotra dia ny matory am-pito miaraka amin'ireo olony. Faly be izahay fa niaraka tamin'ny fianakavianay ity baolina volom-biby kely ity! '
Gunnar the norvejiana Elkhound ho alika kely amin'ny 3 volana
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny norvezianina Elkhound
Sary norveziana Elkhound 1
mpanjaka charles spaniel mifangaro karazana
mpiandry ondry aostralianina tri mainty
mpiandry alemà shetland mpiompy ondry mifangaro